Izinja zokudla izithako izinto zokupheka ezenziwe ngocingo lwezinja ezomile
Izithako zokudla kwenja ziyehluka ngokuya ngohlobo lokudla kwezilwane ezifuywayo. Umehluko oyisisekelo phakathi kokudla kwezilwane okwenziwe ngamakhekhe nokwomile yinani lokufuma. Ukudla okungamisiwe kuqukethe phakathi 70 futhi 80% umswakama, ngoba ngokuvamile lokhu kwenziwa ngemikhiqizo yenyama entsha, kuyilapho ukudla okwomile kwezilwane zasekhaya kuqukethe 10%. Izithako ezingeziwe ezisetshenziselwa ukudla okwomile zifaka i-corn gluten feed, inyama nokudla kwamathambo, amafutha ezilwane, namafutha. Ukuze uthole ukuthungwa okufana nenyama, Ukudla okwomile kudinga i-amylaceous ethe xaxa, noma izithako zesitashi.
Ngenjwayelo, sivame ukuthenga inja empilweni yansuku zonke kubhekisa ekudleni kwenja okhukhumezayo, futhi okuwukudla kwenja yokudla. Lolu hlobo lwezithako zokudla okwenziwa yinja okwenziwa yizithako eziningi zokuxubha okuhlanganisiwe bese zithunyelwa, bese iyoma, okomzimba, ukunambithekile, njll., umswakama ungaphansi kwe 12%. Ukudla kwenja eyomile kungagcina impilo ende, kulula ukugaya nokudonsa,ukudla okulula, okungabizi. Kuya ngokuya kudumile emakethe yokudla yezinja.
Imvamisa yokwenza izinja ukudla ukudla ,sinokwakheka okulandelayo: amaprotheni kufanele abe cishe angama-32 ~ 38%, fat 8 ~ 12%, Crude ash 6%, fiber2.8%, calcium1.0%, phosphorus 0.85% nezinye izinto ezingafuneki.it zingashintshwa ngokuya ngesimo sendawo .
Uhlobo luphi lwezinto zokusetshenziswa eziqukethe izithako esizidingayo ?
Amaprotheni aluhlaza ovame ukugxila okuyisisekelo kokudla okuningi kwezilwane ekubeni ngumthombo wamabhulokhi wokwakha kwempilo (i.e. Amino Acids). Izinja, ondla kakhulu njenge-carnivores, zidinga ama-amino acid abalulekile, konke okungatholakali kubhalansi efanelekile emithonjeni eyodwa yamaprotheni enziwe ngesitshalo se-soya, noma uzitholela amaprotheni, ukwakha izinwele, isikhumba, izinzipho, izicubu, imisipha, imisipha, kanye nenhliziyo. Ibuye idlale indima enkulu ekukhiqizweni kwama-hormone.Imithombo yamaprotheni enja yenja-yokudla ifaka nenyama, izinkukhu, inhlanzi, nezinye izithako zezitshalo ezinjengommbila we-gluten kanye nesidlo se soya.
Imithombo ejwayelekile ye-carbohydrate izitshalo nokusanhlamvu. Ama-carbohydrate, futhi ihlukaniswe njengezinkanyezi (ushukela) nemicu, hlinzeka amandla nobuningi, ngokulandelana.
Ama-Starches enziwa ngezinhlobo ezahlukahlukene zoshukela, njengeglucose noma i-fructose. Ngokugaya, izinja zingaguqula ushukela kalula zibe amandla asebenzisekayo.
Isikhunta singase noma singavuthwa noma siphulwe sibe ngama-acid amancanyana amaketanga ngamagciwane emathunjini enja. Imithombo ye-fiber eningi kakhulu, njengezinsini zemifino, ahlinzeke ngamanani amaningi aphezulu wama-acid-chain acid. Imicu ethambile ngokulinganisa, njenge-pulp ye-beet, hlinzeka ngama-acid acishe abe yinqwaba kanye nenqwaba yokuchitha imfucuza. Izicucu ezivuthayo kancane, njenge cellulose, ahlinzeke ngobuningi bendawo yokuhambisa imfucumfucu ngokugaya ukudla kanye nama-acid acid ambalwa kuphela.
Amafutha ahlinzeka ngama-subunits abalulekile wamafutha, Ama-omega-6 nama-omega-3 fatty acids. Ama-acid e-Omega-6 anamafutha aqakathekile ekunakekelweni kwesikhumba kanye nejazi kanye nesakhiwo esifaneleko se-membrane. Ama-acid ama-Omega-3 aqukethe ama-asidi aqakathekile ekubumbeni kwegazi nasekunciphiseni ukuvuvukala.I-membrane enama-cell amaningi yenziwe ngamafutha. Amafutha futhi asiza ukugcina izinga lokushisa lomzimba, lawula ukuvuvukala, futhi nokuningi. Amafutha ayindlela eyinhloko yamandla agcinwe emzimbeni, ukuhlinzeka amandla aphindwe kabili ama-carbohydrate noma ama-protein.which atholakala emawini, izinkukhu, inhlanzi, futhi utshale uwoyela, njengamafilakisi namafutha zemifino.
Amavithamini anesibopho sokukhuthaza ukukhula kwamathambo, ukugcwala kwegazi, ukukhiqizwa kwamandla, nokuvikelwa komoya.
Amavithamini A, D, E, futhi i-K idinga amafutha okufakwa emzimbeni, kuyilapho amavithamini anjenge-B-tata amavithamini kanye novithamini C adinga amanzi ukuthi afakwe emzimbeni.
Amaminerali ahlinzeka ngokusekelwa kwamathambo nosizo ekudluliseleni kwezinzwa kanye nemisipha.
IMINININGWANE YOKUPHILA KWE-DoG
Izinja zinganambitha izinto ezibabayo, okunosawoti, limnandi, futhi omuncu. Uma kunuka okuthile kuyinja, cishe izokwehla ihabhu. Ngemuva kokuluma izithandani, ukuthungwa noma ukunambitheka kungadlala indima, too.so ifektri yokudla yezinja ivame ukunambitha ukudla kwenja ekunambithekeni okuhlukile ukuheha izinja ezihlukile.